Kuparadza Kupandukira boka revatsoropodzi vakabhadharwa: Martin Vrijland
Kuparadza Kupandukira boka revateresi vakabhadharwa
Akaiswa mukati Kuparadza Kupandukira, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 8 October 2019	• 1 Comment
Ah, haufanire kuudza chero munhu akaomarara nenhau dzemitambo nezvematongerwo enyika. Kuratidzira kweVapanduki, iyo isina rezinesi yakapihwa zvachose, vanokundwa nemitezo yevatapi venhau uye kusungwa hakuna chinhu kunze kwekuratidzira kamera. Izvo chaizvo zvine vanhu vashoma vane zvakajairika (zvishoma zvishoma mafashoni) hippie anotarisa, vanogona kuwana mari shoma yekumisa tende kekutanga muhupenyu hwavo uye vasina kana zano rezvavari kutaura nezvazvo.
Nhepfenyuro PowNed, inogona zvakare kuhwina zvimwe zvikwereti nekuratidzira zvakajeka kuti vanhu vadiki havazivewo kuti CO2 ndiyo chidimbu checabbon kabhoni, isu isu parizvino kazhinji chiratidzo pano vaona pane saiti kuti kuratidzira kwakadai, kusanganisira bongozozo nekusungwa, vari pasi pefambiro uye vanorohwa nePowNed yakafanana. Asi nekuendeswa kwebhotoni-mu-pahuro pehuro bhanandi (uye nekudaro 'kurudyi' Thierry Baudet mufananidzo) mutori wenhau iwe unosundidzira varatidziri mukubatwa basa uye nhoroondo yakaratidza kuti zvese zvaunopa iye ari chimiro chemunhu anozopedzisira agamuchira iyo inviolability chimiro.
PaSvondo 10 Kubvumbi 2016 ndakaenda kuThe Hague neimwe shamwari kuti ndinyatsozvitarisisa paPegida kuratidzwa uye ndione kana iwo mufananidzo unotsanangurwa nevatori venhau uchinyatsoitika. Takakurumidza kuona kuti izvi handizvo. Isu takaona nemeso edu kuti kuratidzira kwakadai kuchirohwa zvachose nevezvenhau uye kuti kuratidzira nekuratidzira, kusanganisira kusungwa, kwakaiswa mushe.
Zuva rakatanga zvakanaka, patakange tine kapu yekofi yakakomberedza hafu ye1 mumasikati uye ini ndakatanga kuita bhaisikopo kubva kuseri kwefenzi yakatarisana nenzvimbo yeSpui. Pakare ipapo maaipi maviri akauya kwatiri kuzokumbira ID yedu kadhi. Muchokwadi, zvakazoitika kuti ivo chaizvo vakaita izvi kune wese anenge achipfuura. Huwandu hwemapurisa aivepo hwakanga hwakakura zvakanyanya zvichienzaniswa neboka revaratidziri. Ini ndinofungidzira kuti kwaive nevamiriri ve500 pavaratidziri ve50. Izvi mukusiyana nem meseji iri mumahara midhiya, iyo yaiti kune zvakadaro 100 varatidzi vaive. Izvo zvingaite senge zvakadaro, nekuti pakatarisana nevaratidziri vakatenderedza 1 vakafamba vachitenderera pavatori venhau ve1, vemifananidzo kana cameramen. Chaizvoizvo yaive show inosiririsa. Turnout yacho yaisanyanyo kukosha. Izvo zvakafanana zvakashandiswa kune inonzi inonzi-counter-kuratidzira kwaAnasfa.
Kunyangwe pamberi pechiratidziro, kuyedza kwakaitwa kuti kubatwa kusungwa nekuti ME iripo 'kunze kwebhuruu' nyanzvi yehunyanzvi Frank van der Linde kusungwa. Izvi zvaiita sekunge zvakawiriranwa kare, nekuti vese kamera nemifananidzo vaiziva chaizvo nguva uye vakagadzirira kutora mifananidzo. Hazvisi pasina chinhu kuti Frank anozvidaidza kuti inyanzvi yekuita basa, nekuti zvaitaridza senge chiitiko chekudzidzira. Nekudaro, zvisiri zvehunyanzvi zvekuti mamwe midhiya aive akafungidzirwa panguva ino. Chii chakazoitika? Van der Linde haana kubatwa zvachose kuseri kwevan, asi aingotaura kwemaminetsi nevarume anga achangomutora "zvehasha" pamberi pemakamera. Bust! (ona mifananidzo yemavhidhiyo pazasi pezvinyorwa)
Chiratidziro pachacho chaivewo nezvimwe zvinhu zvepa set up show. Iyo helikopta yemapurisa yakapedza chiito. Powned aive aripo ne cameraman: a blonde aingosvika chete kune marudzi ewairesi uye director. Uye zvakare, iwe waive uine timu kubva kuNOS, iyo Telegraaf, omroep West uye haugone kufungidzira kuti yakaipa. Chii chinofanirwa kuitwa nenhau dzese dzenhau nemaminetsi akadaro? Mhinduro yacho inogona kutofungidzirwa. Zvinofanira kuita sekunge kubudirira kukuru kuri kuwanikwa nekukurudzira huwandu hwevanhu kutarisana. Hapana chinhu chiri chechokwadi. Turnout yaisanganisira chimwe chinhu kunze kwemaoko mashoma emahara akawedzerwa, sezvatiri kuona parizvino paExpinction Rebellion. Aiwa, ini handina kuona cheki inobhadharwa inoratidza kuti ivo vakapinda basa, asi chaive chisiri chinhu chikuru kambani ine mavara chaizvo kuti chaiye Pegida timu yakawana mabhana ekunze nezviratidzo mumaoko avo panguva chaiyo uye ndokuzovaisa pamberi pavo. kuisa kamera. Zvese zvakatenderedza kutenderedza kamera yaivepo uye shots. Uye PowNed yechokwadi akabvunzisisa zvese izvi zvakapusa zvinotarisa zvakawedzerwa.
Pane imwe nguva ini ndaiteerera kubvunzurudzwa naPowNed nemumwe mukadzi ane bvudzi dzvuku. Paakabvunzwa pava paya, zvakazoitika kuti aigara munharaunda uye aive neyake blog, uye akange adzidza chimwe chinhu kubva kurukurirano pakati pemapurisa. Iye aive anzwa kuti kune 25 nhamba yevanopikisa-muBurgerking vakagadzirira kurwisa Pegida varatidziri-vanowedzera. Ona vhidhiyo pazasi. Nenzira, kana iwe uchinzwa ruzha rwemashure, zvinoita sekunge kutaura kunoshamisa kuri kupihwa. Izvo zvaive zvisiri chimwe chinhu kupfuura vanhu ve4, kusanganisira Pegida Netherlands mutungamiriri Edwin Wagensveld uye vanhu vashoma avo mumwe nemumwe akaverenga zvinonzwika chinyorwa.
Ndakafunga kufamba pamberi pechiratidziro ndokutarisa Burgerking yakataurwa nemukadzi mutsitsi-mutsvuku. Uye hongu, kwaivapo: ivo vanopikisa-anti of Antifa. Ndinovadaidza kuti vanopikisana-nekuwedzera, nekuti zvese zvaive nezve chiitiko. Kunyangwe munguva yemhirizhonga yairidzwa, nhengo zhinji dzeboka iri dzakaisa grin kumeso kwavo, kubva kwawaigona kuona kuti vaitamba. Zvaive pachena kuti kirabhu yese yeAntfa yakaiswa muBurgerking kuti ikwanise kuseta vakasungwa muchiitiko. Nekuti nei iwe uchibata boka muBurgerking kusvikira chiratidzo chePegida chidarika uye wobva wavasiya muBurgerking pamberi pezvikwata zvese uye kuvasunga mukati memasekondi e2? Chokwadi waigona kuve wakamboita izvozvo zvisati zvaitika? Vakanga vangogadzirira chiitiko chavo. Kusungwa kwacho kwaisava chinhu kunze kwekuratidzwa pamberi pemakamera. Kubvira zvakare!
Zvainakidza kwazvo kuona kuratidzwa kwacho yakazara vakafamba vachipfuura nemuguta uye sei pasina chimwe asi chirevo chimwe chete chakatemerwa kupfuura "AZC ichienda nayo!"Izvozvi zvakare zvaive pachena kuti rwendo urwu rwekufamba nepakati peguta rwakanga rwusiri chimwe chinhu kunze kwekuratidzira; yakagadzirirwa kuronga nyonganiso mudiki paBurgerking yeavo vanoita kamera nemifananidzo iripo. Kusungwa kwe54 kunotaurwa kuna Antifa munhau kwakanyanyisa. Uyezve, dzaisave zviratidzo chaidzo. Gonhi reBurgerking rakavhurwa nemapurisa akafanana vakaita 2 masekondi mushure mekusungwa. Iwe unogona kuudza anenge mangani mowedzero aivapo muBurgerking. Nenzira, pakanga pasina vashandi vaivapo muBurgerking, saka nzvimbo yakanyatsobhadharwa kuitira chiitiko ichi.
Chikonzero chekushanya kwekuratidzira muThe Hague kwaive kwekuona nemeso ako pachako kuti kuratidzira kwakadai kumisikidzwa sei uye kuti izvi zvinoshanda sei zvinoenderana. In 2013 ndakaona kuti kuratidzira kwese kwapera. Izvozvi zvinogona kuve pachena kuti mhedzisiro iyi yakarurama.
Kana iwe uri kufunga kuratidzira zvakare, ziva kuti zvese zviri pasi pekutonga kwenyika. Ah hongu, uye iyo kamera yemotokari kamera iripo (ona iyo chena bhazi mune iyo maficha akateedzana) yakanga yakagadzirirwa gumi nemakamera kutenderera bhazi uye zvakare maviri anonakidza kutenderera makamera ayo mafirimu zvese uye zvimwe atova nechiso chako kunyoreswa kana uchingori zvishoma mukati nzvimbo iri pedyo. Saka tinogona kutaura nechokwadi ne100% kuti kuratidzira kuri kuitwa. Zvese zvinodzorwa nemapurisa mamiriro. Saka isu tinonyatsofunga here kuti hapana sangano shure kweiyo Extinction Rebellion kuratidzira pasi rese? Ehe saizvozvo kune sangano shure kwaizvozvo! Iyo ndiyo yekuruboshwe munda uyo unonzi unotsigirwa naGeorge Soros nechekurudyi (ona pano), asi pakupedzisira vese kuruboshwe uye kurudyi kwakarongeka neakafanana boka rekeres uye chiratidzo chichafuridzirwa kurudyi (ona ichi chinyorwa yeimwe tsanangudzo yakadzama), kuitira kuti mugwagwa kune hurumende yepasi rese uitiswe pamwe ne 'shanduko yemamiriro ekunze' sechikonzero chakakosha. Trumanshow!
Source chinyorwa listings: nu.nl, notalotofpeoplenowthat.wordpress.com
Ndivanaani vari kurwisana nevashanduki vemajena muParis? Video proof infiltrants
Kushayiwa kwevarume uye vatungamiri vezvematongerwe enyika vari kure muEurope
Sopo rekukakavadzana kwevasarudzo mumasarudzo omumatare muBar: Thierry Baudet nevamwe vateereri vari mumhepo
Zvirongwa zvezororo Aruba, Bonaire, Curaçao? Iva wakagadzirira hondo yekutanga neU.SA neZimbabwe zviwi zvitsuwa
Zvigadzirwa zvejasi zvinopesana neMugovera unouya: uchapupu hwemapurisa anotungamirirwa nehurumende?
Tags: Amsterdam, zviratidzo, Kuparadza Kupandukira, Featured, checked, funded, George, zvinopikisa, Soros, maguta, nyika
Sly femme Halsema akadzidza zvakawanda mune theatre kabati. ona Parool nhasi pasi pehukama
MaPurotesitendi anochengetedza vanonzi vaPurotesitendi nemapurisa neMI, izvo zvakavatadzisa kutendeuka.
Nyanzvi yakatamba kutamba uku. Uye iyo imwechete nguva Timmermans inoshevedza mamiriro ekunze papa,
iyo inogona kuve yakatonyanya kujeka, chikafu chevadzidzisi vezvemagariro.
Ndakatonzwa kuti pakati pe (vanyengeri) varatidziri vaive vanhu vadiki
vanofarira kudzidziswa kwemurawo kunze kwenyika, izvo hazvizo
95% ye (vanyengeri) varatidziri vaive vekunze.
Ah sei ipapo ??? pindura: "Ipapo havazivikanwe nekukurumidza zvakadaro"
« Iyo mhando 'kurudyi' uye nenzira yakanyatsorongwa yekushambadzira zano rekunyomba
Turkish inotsamwisa Syria harbinger yeEurope »
Total Visits: 13.130.036
SandinG op Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 2)
Martin Vrijland op Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 2)
ongorora op Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 2)
SalmonInClick op Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 2)
Itai 1.653 vamwe vanyori